आजको राशिफल २०७८ श्रावण १ गते शुक्रबारGandaki Press
आजको राशिफल २०७८ श्रावण १ गते शुक्रबार
साउन १, २०७८ ०८:०६ मा प्रकाशित
वि.सं. २०७८ साल श्रावण १ गते शुक्रबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ जुलाई १६ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार आषाढशुक्लपक्षको सप्तमी तिथि रात्रि २ः०८ बजेसम्म, त्यसपछि अष्टमी रहनेछ ।
मेष – कामको सिलसिलामा आकस्मिक यात्रा हुनेछ । शत्रू परास्त हुनेछन् । धनसम्पत्ति जोड्ने योग बनेको छ । मानसिक क्षमतामा निखारता आउनेछ । कलात्मक कार्यमा मन जानेछ । सुखसन्तोष मिल्नेछ ।
वृष – मानसम्मान मिल्नेछ ।सन्तानको प्रगतिमा रमाइनेछ । विशेष कार्यक्रममा अतिथिको सत्कार पाइनेछ । छरछिमेकमा आफ्नो छुट्टै सम्मान मिल्नेछ । आर्थिक पक्ष बलियो नै रहनेछ । असहज परिस्थिति हट्नेछ ।
मिथुन – शारीरिक आलस्यता कायमै रहनेछ । दोधारेपनले निर्णय लिन गाह्रो पर्नेछ । काम गरेर चित्त बुझाउन सकिने छैन । अनावश्यक कार्यमा समय विताउँदा महत्वपूर्ण कार्य छुट्नेछ । ठूलो लगानि नगर्नुहोला ।
कर्कट – इच्छा शक्ति बढ्नेछ । आत्मबल आत्मविश्वास बढेर जानेछ । ठूला व्यक्तिको संगतले उच्चस्तरीय कार्यमा सहभागी भइनेछ । साथीभाइको सहयोग लिँदा समस्यालाई हटाउन सकिनेछ । आकस्मिक धन लाभ हुनेछ ।
सिंह – शैक्षिक क्षेत्रमा रुचि रहनेछ । अचल वस्तुमा गरेको लगानिले दिगो रुपमा लाभ पाइनेछ । मिहिनेतको उचित रुपमा कदर हुनेछ । नयाँ कार्य योजनाहरु रचिने छन् । कुटुम्बको सहयोगले कार्य बन्नेछन् ।
कन्या – सानो प्रयासबाट नै कार्य बन्दा काम प्रतिको मोह बढ्नेछ । काम अनुसारको नाम, दाम मिल्नेछ । ठूला व्यक्तिको सहयोग पाइनेछ । धेरैको विश्वासको पात्र बनिनेछ । सृजनशिलताको विकास हुनेछ ।
तुला – मनमा शंका उपशंका उब्जनेछ । बाह्रौं भावमा स्थित चन्द्रमा ग्रहले खर्च भार Þवात्तै बढ्नेछ । आर्थिक अभावले कार्यहरु अड्कने छन् । हतारमा निर्णय लिँदा समस्यामा परिनेछ । बोलि अनुसार कार्य हुनेछैन ।
बृश्चिक – बन्दव्यापारबाट लगानि अनुसारको लाभ मिल्नेछ । सोच्दै नसोचेका कार्यमा एक्कासी सफलता मिल्नेछ । आश मारेर बसेका कार्यले समेत स्थान पाउने छन् । प्रीयजनसँगको रमाइलोपल वित्नेछ ।
धनु – सहमतिबाट कार्यहरु बन्नेछन् । मिहिनेत अनुरुपको प्रतिफल मिल्दा काम गर्ने हौसला थपिनेछ । सामाजिक कार्यमा समय वित्नेछ । व्यापार भन्दा नोकरीबाट जस मिल्नेछ भने नयाँ जिम्मेवारी समेत पाइनेछ ।
मकर – काम गरेर सुख, सन्तोष मिल्नेछ । पूराना मित्रसँगको मिलनले मन खुसी रहनेछ । भाग्यले साथ दिँदा थालेका अधिक कार्यहरु सफल बन्नेछन् । मिहिनेती प्रबृत्तिको विकास हुनेछ । आदरसत्कार मिल्नेछ ।
कुम्भ – अवसरलाई चिन्न नसक्दा महत्वपूर्ण मौका फुत्कनेछ । तपाईँले विश्वास गरेका व्यक्ति नै विरोधमा उत्रनेछन् । सञ्चित धन खर्च गर्नुपर्दा, नैराश्यता छाउनेछ । अरुको लहैलहैमा नलागि स्वविवेकले कार्य गर्नुहोला ।
मीन – मन प्रसन्न बन्नेछ । विपरीत लिंगीको सहयोग पाइनेछ । बोलिको प्रभाव रहनेछ । अध्ययनमा रुचि जाग्नेछ । प्रेम प्रस· चल्नेछ । छोटो रमाइलो यात्राको अवसर मिल्नेछ । सकारात्मक सोचाई आउनेछ ।